Naato Tao Anatin’ny Fifidianana Mampiadi-hevitra Ny Fahilavitra Tsy Miankina Iray sy Radion’ny Fiarahamonina Iray Ao Zambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2016 9:08 GMT
Sarin'ny filazana an-gazety avy amin'ny Manampahefana misahana ny Haino Aman-jery Tsy Miankina manambara ny fiatoana.
Naaton'ny Manampahefana misahana Ny Haino Aman-jery tsy Miankina ao Zambia (IBA) ny fahazoan-dalana handefa fandaharana ao amin'ny fahitalavitra iray tsy miankina lehibe indrindra ao amin'ny firenena, sy radio roa noho ny “fitondran-tena tsy matihanina mitera-doza ho an'ny fandriampahalemana sy ny fitonian'ny firenena” nialoha, nandritra ary taorian'ny fifidianana 2016.
Nanamarina ny fepetra noraisiny hoan'ny Fahitalavitra Muvi, Radio Komboni ary ny Radio Itezhi Tezhi ny mpandrindra ny haino aman-jery tamin'ny filazana ny andininy faha-29 (1) (J) ao amin'ny Fanitsiana 2010 ny Lalànan'ny IBA, izay milaza fa “afaka manafoana ny fahazoan-dalana ho an'ny haino aman-jery ny IBA raha toa ka ilaina ho an'ny tombontsoan'ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana, ny fandriampahalemana, ny mahasoa sy ny fitoniana izany fanafoanana ny fahazoan-dàlana izany”.
Avy hatrany taorian'ny fanambaran'ny IBA momba ny fampiatoana, nivoaka ny tatitra fa nalain'ny manampahefana avy ao amin'ny Manampahefana misahana ny Vaovao sy ny Fifandraisana ao Zambia niaraka tamin'ny polisy ny fitaovana fandefasam-peo tsotra tao amin'ny Muvi TV.
Nahatonga ny Muvi TV sy ny Radio Komboni ary ny Radio Itezhi Teshi ho toerana lehibe indrindra ho an'ireo mpanao politika mpanohitra mba hifaneraserana amin'ny mpifidy ny fandrakofana mitongilana ataon'ny fahitalavi-panjakana ao amin'ny firenena, Zambia National Broadcasting Corporation.
Nandrotsa-bato tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny 11 Aogositra 2016 ny Zambiana. Nambara fa mpandresy ny filoha am-perinasa, Edgar Lungu. Na izany aza, nanohitra ny voka-pifidianana tao amin'ny Fitsarana Avon'ny Lalàmpanorenana ny kandidan'ny fanoherana lehibe indrindra, Hakainde Hichilema..
Niampanga ny fampiatoana ireo sampam-baovao tahaka ny Ivo-toerana Panos ao Afrika Atsimo, Ivo-toeran-gazety Iraisam-pirenena, ny MISA Zambia sy ny Komitim-pifandraisan'ny Haino Aman-jery.
Satria miha akaiky ny androm-pifidianana, nahita ny biraon'izy ireo nakatona sy ny fitaovana fanontan'izy ireo nalain'ny Manampahefana misahana ny Hetra ao Zambia ny gazety The Post, gazety tsy miankina lehibe indrindra mpivoaka isan'andro ao Zambia noho ny hetra mitentina K68 tapitrisa (6,1 tapitrisa dolara Amerikana) voalaza fa tsy voaloa. Nanameloka ny fihetsika ireo fikambanan'ny haino aman-jery, mpikatroka sy ny mpanao politika mpanohitra izay nilaza fa nampiasaina ny mpiasan'ny hetra ho fanampenam-bava ny gazety mandritra ny fifidianana.
“Akatony ny sasany, ampitahory ny ambiny”
Tao amin'ny Twitter, niampanga ny governemanta ho miezaka manampim-bava ny fandrakofam-baovao momba ny fanangonan-tsonian’ Hichilema manohitra ny voka-pifidianana ilay Zambiana mpikatroka ny zon'olombelona, Laura Miti:
Mihevitra aho fa nakatona ny tranom-baovao satria tsy tian'ny governemanta hotantarain'ny tsy miankina ny fanangonan-tsonia. Akatona ny sasany, ampitahorina ny ambiny.
Thandayo, Zambiana mpanolo-tsaina momba ny Teknolojiam-baovao nanontany momba ny antony nanosika ny filoha voafidy Edgar Lungu:
#MuviTv Lova inona no tian'ny #ECL sy #PF avela? Hitarika anao any amin'ny fialam-bolinao ny filoha tohananao
Niaro ny Muvi TV ny sasany tao amin'ny Twitter, na dia eo aza ny tsy fitiavan'izy ireo manokana ny fitantaran'ilay fahitalavitra.
Elias Munshya, Zambiana bilaogera sady mpisolovava monina ao Canada, nisioka hoe:
Tsy fahitalavitra tsy miankina manaparitaka vaovao diso ny Muvi TV. Miandany, mitongilana, mampisara-bazana izy. Saingy manan-jo hisy ao Zambia demokratika izy
Nampiany fa (ny dikan'ny GRZ dia “Governemantan'ny Repoblikan'i Zambia”)
Tsy maniry fanampiana avy amin'ny GRZ mikasika izay vaovao tokony ho levoniko aho. Manome zo ho ahy handevona ny lainga avy amin'ny #MuviTV sy hanapa-kevitra samirery ny fahalalahana.
Mpisera Twitter Miles namazivazy hoe:
“Manan-jo amin'ny vaovao diso izahay” #MuviTV
“Tsy fifidianana ihany no demokrasia”
Nihantsy ny fanambaran'ny antokon'ny fitondrana (PF) i @PackMuchi fa matihanina kokoa noho ny Muvi TV ny haino aman-jerim-panjakana ZNBC:
Araka ny filazan'ny #PF, matihanina kokoa ny @MYZNBC noho ny #MuviTv. Mitovy ny amin'ny hoe nosy kokoa noho i Madagasikara i #Zambia.
Tamin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny tranonkalan'ny media an'olo-tsotra Zambian Watchdog, nilaza i David Kapoma fa “miha-lasa efitranom-pitsarana” i Zambia.
Tokony ho malina avokoa isika rehetra rehefa miresaka momba ny tombontsoam-pirenena. Ireo mampita ny fomba fijerintsika ho an'ny firenena sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny no tena kendrena amin'izao fotoana izao. […]
Efa niditra vanim-potoana samihafa isika tao Zambia. Tsy misy indra-fo eto. Mizaka ny vokany ianao raha manelingelina ny fahefana.
Nilaza izao manaraka izao tao amin'ny pejiny Facebook ilay Zambiana mpiangaly mozika mampiadihevitra antsoina hoe Pilato:
Mety ao anatin'ny eritreritra tsy dia lalina ny IBA, mihevitra fa manome tombontsoa ho an'ny Filoha Lungu izy ireo saingy raha jerena amin'ny fomba malalaka kokoa, mamono ny anarany malaza izy ireo. Ny demokrasia dia tsy fifidianana ihany, zava-mitranga iray fotsiny ny fifidianana. Mety ho ratsy laza ny Filoha Lungu eo amin'ny tantara, tahaka ny mpanao didy jadona ambany izay manakatona toeram-pahalalam-baovao mifidy hanome sehatra ho an'ny fomba fijerin'ny mpanohitra. Tokony hampahatsiahivina amin'ny IBA fa ny fiampangana tahaka izany izay nataon'izy ireo tamin'ny haino aman-jery tsy miankina dia mety iampangana ny ZNBC ary amin'ny alalan'ny fandikana rehetra ny teny nampiasaina, meloka ny trano fampahalalaham-baovaom-panjakana. Noho ny fanakatonana ny haino aman-jery tsy miankina iray lehibe, nanjary mora niharan'ny tsaho, fanombantombanana sy ny fampielezan-kevitra ny firenentsika.
Nanamarika i Chinganzule fa ny “heloka bevava” nataon'ny Muvi TV dia ny fandefasana fitantarana manohitra ny hafatry ny antokon'ny fitondrana mikasika ny fifidianana:
Lazao ny marina sy ny tena izy, inona no heloka ara-piarovana nataon'ny Muvi TV. Ny zavatra nataon'izy ireo dia manohitra ny fitateram-baovao tsy mifandanja izay mitongilana foana ataon'ny tranom-baovao fehezin'ny fanjakana ho fanohanana ny fampielezan-kevitra ara-poko tarihin'ny PF izay manohitra UPND [mpanohitra]. Ry vahoaka, mihevitra ve ianao fa adaladala na jamba ny Zambiana rehetra ka tsy hahafantatra ny tena zava-misy eto?
“Misaotra ny lalàna aho nametraka azy ireo tamin'ny toerana sahaza azy ireo”
Na izany aza, manohana ny fanapahan-kevitry ny IBA ny Zambiana sasany.
Mpombo, ohatra, maniry mba handeha lavitra kokoa ny IBA fa tsy mampiato ny onjam-peo fotsiny:
Nofoanan'ny IBA ihany koa ny fepetra mitovy nolazain'izy ireo izay milaza fanafoanana fa tsy fampiatoana. Avelao izy ireo hanaraka ny lalàna am-pitandremana raha nofoanan'ireo adala ireo izany, avelao handroso ny fanafoanana ny fahazoan-dalan'izy ireo ary ataovy izany, ampiharo amin'ny fo ny lalàna, mety hiafara amin'ny fanaovanao heloka izany, ny teny hafa amin'ny fanafoanana dia fandraràna na fijanonana fa tsy fampiatoana […].
Nilaza i Tonga fa tokony hakatona ireo haino aman-jery miteraka fizarazarana eo amin'ny firenena:
RAHA MISY ONJAM-PEO TE HITONDRA BARANAHINY NA FIZARAZARANA TSY MAINTSY HAKATONA IZANY SATRIA TIA FIHAVANANA FANDRIAMPAHALEMANA SY FIRAISANKINA NY ZAMBIANA
Ary nisaotra ny IBA noho ny fampiatoana i Kazim:
Hetsika tena tonga soa teo amin'ny IBA ity, ny tiako ambara dia nahoana ireo vitsy ao anatin'ireo adala be zotom-po sy fatra-paniry laza loatra no mandrahona ny fandriampahaleman'ny firenentsika amin'ny alalan'ny fandefasana fanambarana diso hiarovana ny tombontsoan'izy ireo manokana. Leo ity hadalana ity izahay ary misaotra ny lalàna aho nametraka azy ireo teo amin'ny toerana sahaza azy ireo.